Version 0.6.2 – Nza nke obere candies
August 9, 2010 site na rịọ 24 Comments
Ezi ihe na obere nchịkọta
Nke a na-agụnye version a dịtụ nnukwu set nke obere mgbanwe, ebe ọ bụ na 0.6.0 bụ isi tọhapụ ọ bụ nnọọ ihe ụfọdụ na a ga-enwe ihe ole na ole na ga mkpa ụfọdụ Ndetị, na nza nke nhọrọ iji melite software, bit site bit.
Ka anyị na-amalite na ọhụrụ stof!
Ọ bụrụ na ị na-edetara a blog na a ole na ole asụsụ, ma ọ bụ nwere dere na-ahọrọ na-ede ihe otu asụsụ na ndị ọzọ họọrọ ndị ọzọ, ọ bụ omume ugbu a akara a zuru ezu post dị ka iji a dị iche iche asụsụ (Anyị na mbụ chere na dee ihe a post na a dị iche iche asụsụ, ma kpebie megide ya). Akara a post ugbu a mere na-agbakwunye omenala ubi nke tp_language na ka ọ na asụsụ uru. Ịhụ na okenye gburugburu wee ghara nnọọ enweta ego nke a na pụrụ mkpa ka a ofu.
Ọzọ mma bụ ike ọcha na-akpaghị aka ochie nsụgharị gị nchekwa data, ma kpamkpam, ma ọ bụ ndị tọrọ izu abụọ (mgbe chọrọ ime google nsụgharị caching okwu? ugbu a na i nwere ike), Nke a mere na a smart ụzọ, ebe mmadụ nsụgharị na-adịghị ehichapụ, na na-akpaghị aka nsụgharị na e dochie anya ụmụ mmadụ nsụgharị na-nọ na nsụgharị log maka akwụkwọ. Onye ọrụ ezi uche na-gwara mgbe eji nke a, na nkwado ndabere na mpaghara a bụ dịghị mgbe a ọjọọ echiche.
A nnukwu mgbanwe koodu ka e mere iji ibelata collisions na ndị ọzọ plugins, dị ka now niile na ọrụ na constants kwagara n'ime static klas, ụdị nsogbu na-kọrọ na a ole na ole plugins, na kwesịrị mma ugbu a.
Anyị na-ekele Jason, revonorway, Terence, Martin na onye ọ bụla ọzọ bụ onye na-eji ha aka debugging na-anwale a tọhapụ.
Ugbu a na ndepụta nke ọzọ mgbanwe:
Ofu typo na buddypress iyi
Ekwe ka parser nhazi nke nested lang mkpado
Emeso noscript mkpado dị ka zoro, fixes bug na buddypress
Fixes ka nsụgharị nlaghachi azụ na-abụghị Latịn odide
Fixes ka uka ịsụgharị na Bing nsụgharị n'ihi na Chinese na Taiwanese
Shortened nwebisiinka mara na isi iyi faịlụ, ma mee ka ya a bit ọzọ ihe ọmụma
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a version, ma ọ bụrụ na ị na-eme na ọ bụrụ na ị na-eme adịghị, dị nnọọ ka anyị maara banyere ya!
August 9, 2010 na 7:30 obi
Mgbe a ga-nhọrọ na-akpaghị aka mma utu aha nke a sụgharịrị posts?
ISIOKWU: kacha mma SITE
ISIOKWU: ISIOKWU 1
ISIOKWU: ISIOKWU 1 RU
ISIOKWU: ISIOKWU 1 lt
ISIOKWU: ISIOKWU 1 pl
Nnweta a nhọrọ ga-enyere iji kpochapụ nsogbu nke aha duplicating
August 9, 2010 na 7:40 obi
The nhọrọ mee nke a bụ dị taa, dị nnọọ ibipụta ugbu a asụsụ gị aha.
August 9, 2010 na 9:59 obi
Ekele dịrị Gị maka na 🙂
August 10, 2010 na 10:46 na
M na Na mara, n'ihi na m na-Na-arụ ọrụ na aha isiokwu. Ọ bụghị ebi akwụkwọ. M na-eji nkuzi mgbamejije na-ebipụta ọrụ, kama n'elu ihe anaghị arụ ọrụ. Olee ziri ezi na-ebipụta nke a variable?
August 10, 2010 na 1:14 obi
Nwere ike a-aza m ajụjụ?
August 10, 2010 na 1:16 obi
M zitere gị a kpọmkwem email, biko gbalịa kpọtụrụ onye na m na e nwere
August 9, 2010 na 9:43 obi
ekele maka feature-ehichapụ ochie nchekwa data caching, oké atụmatụ maka m blog na puku sụgharịa page.
August 10, 2010 na 10:00 na
hey nwoke! Na ị na-a amamihe! Ọ na-arụ ọrụ ugbu a n'ime BP mgbe m tinye a status update na French, sugharia ya azụ English! I mewo ka ndụ m zuru ezu…hehe.
Daalụ maka ọrụ gị!
August 10, 2010 na 6:28 obi
Na-, njehie a mgbe na-agbalị iji nweta faili ntanetịime.
Ịdọ aka ná ntị: require_once(WP / transposh_3rdparty.php) [function.require-otu ugboro]: okpu-emeghe iyi: Enweghị ụdị faịlụ ma ọ bụ ndekọ na /home/avinasht/public_html/wp-content/plugins/transposh/transposh.php na akara 42
Kearu njehie: require_once() [function.require]: Okpu oghere chọrọ 'WP / transposh_3rdparty.php’ (include_path = '.:/usr / lib / PHP:/usr / Obodo / lib / PHP ') na /home/avinasht/public_html/wp-content/plugins/transposh/transposh.php na akara 42
August 10, 2010 na 6:44 obi
ga-ajụ – bụ faịlụ na e nwere?
August 10, 2010 na 6:55 obi
ee faịlụ a bụ na e nwere.
BTW, i gbanwere plugin nchekwa aha ka dị nnọọ Transposh mgbe rụọ ọrụ…ka nke ahụ na-eme ka a diff?
August 10, 2010 na 7:00 obi
Akpa, mba – ọnweghị ihe ọ mere, M na-eji otu directory aha, nke abụọ, yiri ka ọ na-arụ ọrụ na gị na saịtị (ọ bụ ezie na redirecting ka feedburner), Gịnị ka m na-efu?
August 10, 2010 na 7:02 obi
dị nnọọ ole na ole nkeji gara aga, i deactivated na-arụ ọrụ tranposh ọzọ. M gbanwere nchekwa aha oke na-an-kpọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ rụrụ ọrụ.
M ga-azụ gị ma ọ bụrụ na nsogbu na-ugboro ugboro. Nwere ike ịbụ mgbe m dee a ọhụrụ post, i nwere ike gosi ma ọ bụrụ na ihe niile bụ na-arụ ọrụ. N'ihi na oge ịbụ, fiidi na-arụ ọrụ.
August 18, 2010 na 10:54 na
M na-eji WordPress Download Monitor plugin, translation anaghị arụ ọrụ mgbe download.
Dị ka ihe atụ: http://www.mallwp.com/buy/London+Creative
http://www.mallwp.com/zh/buy/London+Creative (na-arụ ọrụ)
August 30, 2010 na 12:26 na
Ọtụtụ plugins na-eji kee ihe n'ụzọ ịgbanwe URLs mgbe ha na-gburu, ụfọdụ (dị ka buddypress) -enye nko na m nwere ike mfe iwekota na, na ụfọdụ achọ ike ọrụ, mwute ikwu na nke ikpeazụ izu ole na ole m nwere ọrụ n'aka na-agbakwunye ụfọdụ ndị ọhụrụ chinchi (Oops, pụtara atụmatụ) ka usoro na okosụk enweghị ike anya na ọnọdụ gị. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ nwere ike inyere, M ga-eji ya akpọrọ ihe, ma n'ụzọ ọbụla – gị mma na ime bụ ike a ahụhụ anyị trac saịtị (http://trac.transposh.org)
Ndo m onwe m ókè na-enye aka na nke a oge
Michael Feldstein na-ekwu,
August 24, 2010 na 7:06 obi
M na-eji Transposh m isi blog na ya arụ ọrụ dị ukwuu. Ma m nnọọ gbalịrị wụnye ya na a abụọ, ọhụrụ blog (WordPress v. 3.0.1) na m na-na-an error-agwa m na ndị plugin adịghị nwere a nkụnye eji isi mee mgbe m na-agbalị iji rụọ ọrụ ya. M ehichapụ na re-arụnyere na ngwa mgbakwunye a di na nwunye nke ugboro, mgbe niile na-ahụ pụta.
Ọ bụla aro?
August 30, 2010 na 12:46 na
Nsogbu a ga-edozi na 0.6.3 version (na-abịa oge adịghị anya) ma ugbu a,, mgbe wụnye dị nnọọ rụọ ọrụ ya aka site plugins page
cal Davies na-ekwu,
August 25, 2010 na 12:11 obi
Michael, ọ bụrụ nnọọ na-eleghara ihe ozi na pịa azụ na ihe nchọgharị gị wee pịa on plugins ị ga-ahụ Transposh arụnyere.
M na-eche ma ọ bụrụ na ga-abụ ezigbo echiche na-etinye a nkụnye eji isi mee na plugin dị ka a ịdọ aka ná ntị ozi na wordpress nwere ike na-emegharị ọtụtụ ndị.
Otu ajụjụ na m nwere na-eme url translation support .HTML na njedebe?
Daalụ maka oké plugin…
August 30, 2010 na 2:21 na
Banyere .HTML, Echere m na ọ na-eme, nwere nsogbu na n'oge gara aga nke e Olileanya edozi.
August 26, 2010 na 6:51 na
Ndewo e, Dị nnọọ chọrọ ikwu na-ahụ oké ọrụ. M na-ahụ na nke a plugin n'ezie bara uru na ya ọbụna na-enyere m mma m Spanish.
Nanị isi arịrịọ m ga-ga-ekwe ka m dezie akara edemede n'ime m posts mgbe m na-edits ka nsụgharị. Nke a na-aghọ mkpa karịchaa mgbe anyị chọrọ iji ọkachamara ndị nsụgharị nke ụfọdụ n'ime anyị inweta website peeji nke. Dị ka ọ na ugbu a na-anọchi anyị na-rapaara na a ngosi ego nke n'ekpere akara edemede.
Agbanyeghị daalụ ọzọ. Dị ka anyị na-eji nke a on ahịa na saịtị nke na-adịghị eji mgbasa ozi ga-achọ inye onyinye ka anyị na-apụghị n'ezie gị logo na ha saịtị nke mere na wepụ njikọ. Ka m mara otú e si apụ banyere nke a.
August 30, 2010 na 12:50 na
Ihe ị na-arịọ na akara edemede bụ ogologo oge ọrụ na-aga n'ihu, M na-atụ na-enwe mma ozi ọma na nke a na-eme n'ọdịnihu.
Banyere ahịa na saịtị na-adịghị na mgbasa ozi na chọrọ wepụ logo, na-eche free ime na, banyere onyinye, M nwere ike ịgbanwe a iwu na-eme n'ọdịnihu, ma ugbu a,, na-eche free inye ọ bụla ọrụ ebere gị oke, na ike a obere ọma wibe nke nwere ike ejedebe ebe a 😉
Steve bowyer na-ekwu,
September 4, 2010 na 12:24 obi
Im iji SEO ngwa mgbakwunye otú m pụrụ ịgbanwe aha dị ka a sụgharịa otu? M couldnt eme ya : (
Biko nyere m aka ekele..
September 4, 2010 na 6:38 obi
Transposh Aims ịsụgharị utu aha dị ka nke ọma, nke ngwa mgbakwunye ka ị na-eji na i nwere ike nye otu ihe atụ?
September 5, 2010 na 3:29 na
Im eji platinium SEO, ị nwere ike ịhụ na m website,Utu aha ka na bekee , ma eleghị anya, m mere ihe na-ezighị ezi?